မမသီရိ: September 2009
လိုတယ်ဆို .. နိုင်သရွေ့
ဖြည့်ပေးမဲ့.. ချစ်သူ ပါ..
ကို့ ခြေတွင်.. ဘိနပ်ပင် ဖြစ်ချင်စမ်းပါရဲ့
အမြဲ သာ လိုက်ပါ လို့ လေ......
ထွန်းညှိ ဖို့ လိုတယ် ဆို...
ကိုယ့် ကိုယ် ကို.. စတေး လို့
ဆီမီး လို ပူဇော် ပါ့မယ်
ကို့ ခရီး မှာ ဆူး မထိ အောင်..
စိုး စိတ် နဲ့ ကွယ်......။
Posted by မမသီရိ at 9/29/2009 09:12:00 AM
သူ့နှလုံးသွေးတွေ အပြာရောင် အသွင်ပြောင်း
စိမ်းညို့ တဲ့ တောင်တန်းကြီးတွေ တောင် ပြာပြာမှိုင်း..
ပန်းရိုင်းတွေ အားလုံး လဲ အပြာရောင်ပွင့်
ပင်လယ်ကြီး ကလဲ အမှောင်ထဲ မှာ ကို ပြာလဲ့
လသာတဲ့ ညကလဲ ပြာ….
ချစ်ခြင်းနဲ့ သူရေးတဲ့ အပြာရောင် ပန်းချီကား..
ကျမ ဥယျာဉ် တံခါးဝ
ကျမ အတွက် သူ… တိတ်တိတ်လေး လာ ချ ထား တာ..
တွေ့ဖြစ်အောင် ကျမ တွေ့ခဲ့ တော့..
ပျော်ဝင်ခဲ့ ပါပေါ့ ဒီ အပြာရောင်တွေထဲ..
ရှက်သွေး နီနီ စွက်
သူ့ကျောလေး ကို သိုင်းဖက် ခိုက်..
သူ့ နှလုံးသား အသံ ကြားလိုက်..
ကျမ ကိုယ်တိုင်က သူ့ ပန်းချီကား
ကျမရဲ့ဘ၀ အစိတ်အပိုင်း အကုန်လုံး
အမုန်းမပြို.. အပြုံးချိုတွေနဲ့သာ ရှင်သန်သွားတော့မှာ
တကယ် သေချာခဲ့ ပြီ မို့….
သူ့အပေါ်ပြုထားတဲ့ ကျမရဲ့ ကျိန်စာ တွေ..
မဆိုင်း ယခု.. ပြေပါစေ……
Posted by မမသီရိ at 9/26/2009 02:21:00 PM
လွင်ဆော့ သာသာ နော့ပြီ ကို….
ထုံထုံ ကြည်အေး ကြာပန်းလေးလည်း
ကန်လုံးဖွေးဖွေး ပွင့်ပြီ ကို….
ဆောင်းဦး ကြိုငေး နှင်းစက်အေး လည်း
မြက်ဖျား တွဲ ချိတ် စွဲ ပြီ ကို..
စိတ်မှန်းရည်ခဲ့ မောင် မယ် ဖွဲ့လည်း
၀ါကျွတ် အိပ်မက် .. လည်ချင်း ယှက်ဖို့
လက်ချိုး တွက် ရည် .. ရင်တွေ ဖို……။
၀ါလ ကင်းလွတ် သီတင်းကျွတ်မဲ့ ရက် က နီးသထက် နီးလာခဲ့ပြီ
၀ါကျွတ်ရက်ကို မျှော်တွက်နေကြတဲ့ ချစ်သူလက်ရှိ အပျိုကြီး လူပျိုကြီး ချစ်သူစုံတွဲများ
အပျိုလေး လူပျိုလေး ချစ်သူ စုံ တွဲများ
စိတ်ကူးနဲ့ သာ ရူးနေကြရ တဲ့.. လူလွတ်များ…
အားလုံး အတွက် ရည် ရွယ် ထားတဲ့. ၀ါကျွတ်လက်ဆောင် ကဗျာလေး ပါ….
အဆင်ပြေ ပျော်ရွှင် နိုင်ကြပါစေ…။
ထွေးဆော့သာသာ နော့ပြီ ကို….
ဖွေးဖွေးကန်လုံး ပွင့်ပြီ ကို….
မြက်ဖျားတွဲချိတ် စွဲ ပြီ ကို..
လက်ချိုးတွက်ရည် .. ရင်တွေ ဖို……။
ကဗျာဆိုတာ ဆိုလို့ကောင်းရင် ပြီးရော လို့ သဘောထားပြီး
စည်းလွတ် ၀ါးလွတ် ရေးတတ်သူ ကျမရဲ့ ကဗျာလေး ကို
ကဗျာဆရာ မောင်ငယ် လင်းဒီပ . ပြန်ပြင်ရေးထားတာပါ
သူ ပြန်ပြင်ရေးတော့ ပို ..ဆိုလို့ ကောင်းသွား သလိုပဲ နော့..
ကျေးဇူးပါ မောင်လေး ရေ... နောက်လဲ .. မတော်တရော်တွေ တွေ့ ရင်
ပြင်ရေး အုံး နော်..း)...
Posted by မမသီရိ at 9/24/2009 07:11:00 PM
ငါ ဘယ်တော့မှ စွန့်မသွားဘူး ချစ်သူရေ့…
ငါ သုတ်ဖို့ မကြိုးစား ဒီတိုင်းပဲ ထား ထား မယ်..
နှလုံးသွေးစက်တွေ ဖြာပစေ ပေါ့
ငါလျှာနဲ့ မလျှက် ထွက်မြဲတိုင်း ထွက်ပါစေ ငါ ဒီအတိုင်း ကြည့်နေမယ်
ဝေးဝေး တော့ မရောက်နိုင်
မင့်အရိပ် တိုင်ကွယ်နောက် ငါ ရောက်နေမှာ အသေအချာ..
ငါ့ မျက်လုံး စိမ်းစိမ်း
မင့် အိပ်မက်တွေ ဆီက ဘယ်တော့မှ တိမ်းမထွက်စေရ
ငါ့ နာကျည်းမှု သီချင်းတွေ မင်း အနားမှာ အမြဲ ဝေနေစေ လို့
ငါ့ ၀မ်းနည်းခြင်း အငွေ့အသက်
မင့်ကို ထာဝရ ထွေးဖက်ထားစေ့မယ်
ငါ့တမ်းတ ခြင်း ကဗျာတွေနဲ့ မင်း ထာဝရ ကြေကွဲနေစေရမယ်
ငါ့ ရင်ထဲက အလွမ်းတွေအတွက် မင့် နောက်ဆုံး ထွက်သက်ထိ ပေးဆပ်ရမယ်..
ဘာမှ မတောင်းဆိုပါဘူး အကြိမ်ကြိမ် ငါ ပြောရက်နဲ့
တချက်ပြန်ပြုံး ပြဖို့ မင်း တွန့်တိုခဲ့
ငါ့ ပေးဆပ်ခြင်းများ မင်းတန်ဖိုး မထားတတ်ခဲ့
ငါ့ ချစ်ခြင်းတရား.. မင်း တန်ဖိုး မထားတတ်ခဲ့
ငါ့ ဂရုစိုက်ခြင်း များ မင်း ပေါ့တန်စွာ ခံယူခဲ့
ငါ့ သတိရခြင်းများ မင်း ဥပေက္ခာ ပြုထားခဲ့
ငါ့ လွမ်းဆွတ်ခြင်းများ မင်း မသိယောင်ပြုထားခဲ့
အားလုံး အတွက်.. အားလုံး အတွက်..
မင်း.. တဘ၀စာ ပြန်ပေးဆပ်ရတော့မယ်
အနေဝေးနေတာပဲလို့ ကြိတ်ပြီး ဖြေတွေး မတွေးနေနဲ့
ခုပဲ နောက်လှည့်ကြည့်လိုက်
ရောက်နေပြီ မင်း အနား မှာ… အဲဒါ ငါ့ ၀ိဥာဉ် လေ…
ငါ့ ရဲ့ လှောင်ပြုံး
ငါ့ ရဲ့ မျက်ရည်ကြားက ရီမော သံ သဲ့သဲ့
ငါ့ ရဲ့ ပူဆွေးခြင်း အသက်ရှူသံ တိုးတိုး
ငါ့ရဲ့ ပြန်အဖတ်ဆည်မရတော့တဲ့ နှလုံးသား
မင့် ကို အမြဲခြောက်လှန့်စေ တော့မယ်
မင်း.. တမြည့်မြည့် .. ခံစားစေရမယ်…
မင်း.. ဘယ်တော့မှ ….
အဲဒီ ခြောက်လှန့်ခြင်း အိပ်မက်က ရုန်းမထွက်နိုင်စေရ..
မင်းကို ချစ်တဲ့ ငါ့အချစ်က အမှန်တရား
အဲဒါ ငါ့ ရဲ့ သစ္စာ စကား
အဲဒီချစ်ခြင်း တရားကြောင့် ပဲ
မင်း…. ………. ငါ့ ကျိန်စာ မိပါပေါ့ ချစ်သူ ….။
Posted by မမသီရိ at 9/10/2009 07:05:00 PM